"Lo muntu" - ukuncoma noma Zihlazisa? Inani netimphawu ukusetshenziswa kwegama elithi "indoda"
sivamile bayisebenzise le nkulumo ethi cliched, ngaphandle kokucabanga ngemiphumela. Iqiniso lokuthi umuntu oyedwa uyoqonda nge amahlaya njengesibopho uncoma nezinye resentfully ukhumbule futhi iyofana. Uphi umugqa phakathi nengxoxo nesu lokungacunuli futhi sibe ukuchwensa izimfundiso ezingamanga aluhlaza? Konke kuncike interlocutors futhi Ubuhlobo obuseduze phakathi kwabo. Futhi uma umuntu wanamuhla kwencazelo "indoda" luyeza? Kuyinto iyamukeleka yini noma cha? Ake sizame sokulungisa le nkinga.
Meaning of igama elithi "umuntu"
Iyini le "ndoda" kulo mqondo? Abantu abaningi bakholelwa ukuthi igama kuyinto isitsotsi. It has a acacile ngokomzwelo: the abantu bayawabutha egalaji imibuthano thematic, ukuphuza amalitha ubhiya ngesikhathi ebuka umdlalo olandelayo, usebenza Izigayo steel futhi musa aphuce intshebe yakhe izinyanga. Kodwa indoda ibhizinisi suit eyodla e yokudlela futhi ngeke usho ukubiza umuntu - kuphela indoda.
Lokhu ukusetshenziswa umahluko ngokuyinhloko ngenxa yomsuka wawo. Asiqale kusukela esikhathini emphakathini nezokulima. Man - bekhuluma izwi "ongumlimi". Lokho kuyinto, indoda elula ozikhandlayo usebenza kusukela ekuseni kuze kuhlwe, hhayi kakhulu athuthukile ngokuya kwamasiko, ngokungafani kuya bendawo. Ungahlangana le ncazelo, futhi kwezinye izichazamazwi:
Esikhathini isichazamazwi ijagoni - umuntu oboshelwe osebenza ngokukholwa okuhle emsebenzini kwezimilo.
Isichazamazwi ihlonishwe V I. Dalya - umuntu ekilasini aphansi.
Isichazamazwi isipelingi inquma ukubaluleka console -ik- amancane, onikeza lucebe iyunithi umthunzi ubala, ukunganakwa.
Esikhathini isichazamazwi bomcondvofana - ngenalwazi.
Futhi namuhla kungcono isichazamazwi ngempela, eyahlelwa T. F. Efrayimi, leli gama lisetshenziswa ngokunganaki kule incazelo "i abangenalwazi, indoda ill ezifuywa, a ovamile."
Izwi likaJehova incazelo isichazamazwi, kusobala ukuthi usenayo isetshenziswe ngomqondo ongathandeki kuka omuhle. Kodwa ukulahlwa categorical emphakathini, lokhu mqondo, ngakho manje-ke kabanzi lisetshenziswe ngokomzwelo ngaphezulu, inkulumo nehaba.
Ukudla inzuzo "indoda yangempela," kumelwe sikhumbule incazelo yalo original. Ukucabangela ukusetshenziswa impikiswano of ezifana isivinini inkulumo kungaholela ukudideka futhi ukungqubuzana phakathi interlocutors. Manje itholakala mahhala kuwebhu kukhona izichazamazwi eziningi. Ungalokothi sekwephuzile lokhu ngakho bangakwazi ukusebenza ekukwati kufundza nekubhala awo futhi sibheka igama elingajwayelekile noma ibinzana, lapho engangabazi izincwadi. Lona ngomunye wemigomo eyinhloko self - yokuzimela futhi amandla ashukumisayo afanele.
Ngakho, ngo-inkulumo kwamasiko izinkulumo ekhululekile ukuthi kungahunyushwa ngezindlela ezimbili, bazama ukukugwema. Kodwa nsuku zonke lapho kakho kumadoda ngokumelene lokhu kwelashwa ngisho uyaziqhenya "isikhundla" yabo, kungafaneleka ngempela nobunye.
Isiphi isimo lo mlisa ubize indoda
"Indoda" - lokhu akulona neze izwi elilukhuni. Ngo eqanjiwe, nakomagazini futhi kumabonakude ungezwa izwi buyinqqikithi omuhle. Ukuzimisela, amandla, ingqondo kohlaziyo - izakhiwo ezihlobene indoda. Noma yimuphi ummeleli wobulili namandla uyaziqhenya nezimfanelo zayo acwebile ngawo miningi kunesihlabathi imvelo awanikeze.
Njengomthetho, amadoda ngokuthi, ozethembayo guys eqinile ozikhandlayo bayakwazi ukuphendula ngezenzo zabo. Phakathi kwabo wenza ukuxhumana ngaphandle snot noshukela ngokucacile futhi lihlaba esikhonkosini. A uhlobo uphawu isilwane ngobudoda sibekwa umqondo wegama. Futhi ulisebenzise hhayi eyihlazo.
Nokuthuka noma enhle?
Kunezimo lapho igama elithi "indoda" abangase basibheke ngokungalungile. Ngokwesibonelo, ukuvula ngendlela efanayo kuya isingezansi ibonwe obedlula ngendlela, ungathola ngempama kumfanele ebusweni. Njengoba le ndoda emgwaqeni kuzothatha ke ukuhlukumeza imingcele zokuxhumana. Futhi, kukhona abafana abayokhethwa nokuthuka ukuzwa isikhalo ezinjalo - futhi lokho kulungile kakhulu. Amazwi ayalimaza ezingaphezu kuka nendaba. Kuyinto ithuluzi elinamandla ukuxhumana nabantu, ngakho ngaso sonke isikhathi kufanele ucabange ngaphambi kokukhuluma.
"Indoda" - kubonakala sengathi ukwelashwa evamile, kodwa has a etymology kuyinkimbinkimbi. Ukuze adumise wathumela amazwi acishe afane nawo udinga ukusebenzisa amathuluzi ezengeziwe: buviyoviyo, ngibone isimo sobuso bakhe, ukushukuma komzimba kanye nesimongcondvo saleso kufanele zibhekelele isibalo isibalo. Kukhona umugqa omncane phakathi akuzwise ubuhlungu indoda leli gama, futhi, Ngakolunye uhlangothi, ukuveza inhlonipho yami.
Lo muntu - lena iphupho zonke wesifazane
Ethandwa kakhulu njalo ukusetshenziswa kwegama elithi - inkulumo ethi "indoda yangempela." Mayelana nale nsizwa ukuphupha kanye freshman ukuzikhohlisa, kanye abesifazane olulodwa, namakhosikazi yenza ngokuphelelwa yithemba, indlela engajabule zokuphila eyabo. Nxazonke omnikeza amathiphu amadoda, kukanjani ukuba nje, ukuze ube "ophelele".
Lo muntu - oqinile futhi abazimele. Akanayo imali eyanele yokuthenga ubuthakathaka besikhashana. He is izinqumo nezenzo zabo. Mhlawumbe, it libhekene nomuntu omdala.
Lo muntu ukubona ngokucacile umngcele phakathi kwamakhamera ocingo yesibili. Akalokothi wathatha isikhathi sakhe ubulima waxhumana ekufezeni oyifunayo - amandla, ingcebo nomndeni.
Amadoda angempela musa sokuhleba. Abanaso ukuxoxa noma sahlulele abanye abantu ngoba lokho amandla kungenziwa iqondiswe abanye umsebenzi ewusizo.
indoda Real eligcina izwi lakhe. Uthembisa kuye - hhayi ngesimo lesingakavami kuloko awunalutho.
Futhi ekugcineni, indoda yangempela akubukeki effeminate. izinwele ezinde, ukubhoboza, izingubo bubuhle - konke lokhu kungenzeka esithombeni besilisa.
Uma zonke lezi izincomo akuzona isihluthulelo senjabulo. Kungaba indoda okuyisibonelo ngazo zonke izindlela, kodwa othile ubungeke ukujabulisa bonke abantu, futhi izohlala emanxiweni ekahle sakhe. Ingabe ukulungisa lezi amathiphu, kwaba yilowo nalowo uyazinqumela.
"Ungene indoda, kufanele ..." - kulandelwa unodoli mayelana amadoda "kufanele." Kulesi simo, phakathi kwendoda nowesifazane, lo mkhuba siyingozi futhi elimazayo. Lisho ukuthini igama elithi "indoda" kulo mqondo? Lokuthi indoda kufanele babonise lolo konke, wonke umuntu kufanele, futhi alinalo ilungelo imizwa, nezifiso nemizwa?
Ulenga ilebuli "indoda" ngaso leso sithandwa sakhe, owesifazane odlulela ukuba kumile nge abakulindele. Ungesabi kubonise amathemba kothile - indlela eqinisekile uphele esheshayo. Ukuze ugweme lokhu, vele into futhi udinga abalingani ukuze ngamunye kunomthelela ubuhlobo, iminikelo ukuthi uyazicabangela yena kufanelekile. Awukwazi ukuphoqelela umuntu ukuthanda. Futhi uma uthanda - uyenze into enhle ethandekayo, ngaphandle kokubhala ku isikweleti sakhe ebonakalayo. "A guy ukweleta lutho" - lokhu kulungiselelwa sobuhlobo obuhle.
Ungubani wena - indoda noma indoda?
Siphakamisa ukuchaza zonke umfundi wesilisa, njengoba luhlobene lesi sikhalazo. Uma esifanelana Umbono wakhe zomhlaba - ephelele. Duzane kumele wazi ukuthi le nkulumo igcizelela isimo sakho emphakathini. Uma nakubabona wena ngokuthi umuntu, khona-ke futhi waxwayisa izihlobo zakhe nabangane ukugwema isimo esibi. Ngakho akekho kuyovela ukungabaza ukuthi kusho ukuthini kuwe izwi - ukuncoma noma ukuthuka.
IzAga namazwi: "Lo mdlalo - emhlabeni"
Indlu Petru 1 Petersburg
Uyini imfuno ngesikhathi sangempela?
National Museum, ePrague: ikheli, amahora zokusebenzela, izithombe, izibuyekezo. National Technical egcina amagugu esizwe e Prague
"Corvalol" izidakamizwa. Yokusetshenziswa
Valentino Rossi - inganeko Racing Italy
Ukukhishwa amabele ngesikhathi sokukhulelwa: izinga lesi sifo noma uphawu?
Kuyini wai fay
Electronic TSD (idatha iqoqo esibulalayo): kanjani ukuyisebenzisa?
Fayum portrait: obukhulu yobuciko emhlabeni
Ifakeka Ubuntu ku-USB flash drive
Yikuphi zilimi zikhulunywa e-Switzerland? Izilimi ezisemthethweni ezweni